CCleaner को उपयोग गरेर कसरि एक रजिस्ट्री त्रुटि ठीक गर्न सक्छु?
अब बजार विभिन्न उपयोगिताहरू भरिएको छ जुन विन्डोज अनुकूलन गर्न र सफा गर्न प्रयोग गरिन्छ। दुर्भाग्यवश, उनीहरूको प्रयोग गर्दा, समस्याहरू प्रायः उठ्छन्, र कहिलेकाहीँ तपाईंलाई प्रणालीको पूर्ण पुनःस्थापनामा पुन: रिसोर्ट गर्न पर्छ। यसैले हामी प्रसिद्ध CCleaner उपयोगिता प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछौं।
तर यसलाई कसरी रजिस्ट्री त्रुटि ठीक गर्न सकिन्छ? यो धेरै सरल छ: कार्यक्रम सुरु गर्नुहोस्, "रजिस्ट्री" नामको साथ ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाइँले वांछित वस्तुहरु को बिरुद्ध चेक बक्से राख्नु भएको छ (वा तपाइँ केवल सेटिङहरू असक्षम गर्न चाहानुहुन्छ), तपाईंलाई "समस्या खोज्नुहोस्" बटनमा क्लिक गर्न आवश्यक छ। अनुप्रयोगले अप्रचलित र मात्र गलत रेकर्डहरूको लागि प्रणाली रजिस्ट्री स्वचालित रूपमा जाँच गर्नेछ।
अप्ठ्यारो नतिजाहरू कसरी बचाउन सकिन्छ?
कार्यक्रम पूर्णतया नि: शुल्क र राम्रो तरिकाले Russified छ। यसले बेवास्ता कार्यहरू जस्तै सामाजिक सञ्जाल वा जगेडासँग एकीकरण गर्दछ । यसैले तपाईले "टिन्सल" द्वारा विचलित बिना, रजस्ट्री त्रुटिहरू ठीक गर्न सक्नुहुन्छ। दुर्भाग्यवश, यस्तो बुद्धिमानी दृष्टिकोण नि: शुल्क सफ्टवेयरका सबै उत्पादकहरूका लागि सामान्य होइन।
तपाईंको कम्प्यूटरको शक्तिमा निर्भर गर्दछ, उपयोगिता थोपा पछि केहि समय पछि यसको खोज परिणाम हुनेछ। स्वत: मोडमा रजिस्ट्री त्रुटि सुधार गर्नु अघि, तपाईं म्यानुअल सुधारको विकल्प रोज्न सक्नुहुनेछ। फिक्स सुरू गर्नु अघि हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाईले पूर्ण ब्याकअप बनाउनु भयो भने तपाइँ आफ्नो कार्यको सहीता बारे निश्चित हुनुहुन्न। यदि केहि सफा गरे पछि गलत हुन्छ, तपाई सधैँ प्रतिलिपि बाट सबै महत्त्वपूर्ण मापदण्डहरू पुनर्स्थापित गर्न सक्नुहुनेछ।
तर यदि तपाईंले अनुप्रयोगको सेटिङमा केहि छुनु भएन भने, यो यो बिन्दु पुग्न सम्भव छैन। कार्यक्रम स्वचालित रूपमा गलत रेकर्डहरू सच्याउनको लागि उत्तम विधि चयन गर्दछ।
प्रणालीमा "फोहोर" को पूर्ण अभाव सुनिश्चित गर्न माथिको दुई वा तीन पटक दोहोर्याउनु राम्रो हुन्छ।
र यदि तपाइँ हार्ड ड्राइभमा अर्डर बहाल गर्न चाहनुहुन्छ भने, सबै अनावश्यक हटाउँदै, कार्यक्रम सुरु गर्नुहोस्, सफाई वस्तु चयन गर्नुहोस्, र त्यसपछि विश्लेषण बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रक्रिया सुरू गर्नु अघि, यो प्रणालीमा स्थापित सबै ब्राउजरहरू बन्द गर्न दृढतापूर्वक सिफारिस गरिएको छ, अन्यथा अनुप्रयोगले सही रूपमा निर्धारण गर्न सकेन भनेर उनीहरूले आफ्नो कामकालमा थप फाइलहरू सङ्कलन गरेका छन्। वैसे, तपाइँ सफाई सुरू गर्नु अघि, तपाईले अनुप्रयोग मेनुमा जाँच्न सक्नुहुनेछ, जो जाँच गर्न आवश्यक छ। यस कार्यक्रमले रजिस्ट्रीमा त्रुटिहरूको सुधारको लागि अत्यन्तै "स्मार्ट" हो जुन, तपाईंलाई आवश्यक कुराको गलत हटाउने बारे चिन्ता नगर्नुहोस्।
सेटिङहरूमा छुनु हुँदैन
यद्यपि, अग्रिममा तपाईंले चेतावनी दिनुभएको छ कि यस सूचीमा धेरै वस्तुहरू अज्ञात बायाँ छन्, अघिल्लो सेट मानहरू छोड्नुहोस्। तपाईले रजिस्ट्री त्रुटिलाई ठीक गर्नु अघि यी बिन्दुहरूलाई सावधानीपूर्वक पढ्नुहोस्:
लगभग सबै स्थापित प्रोग्रामहरू रेजिजनमा निशान छोड्छन्, जसको अधिकांश जसलाई कुनै पनि आवश्यक छैन। केवल तपाईं यस मामला मा निर्णय को फाइलहरु को छोड दिए र जो को हटा दिए जान्छ। यदि तपाईं यस बारेमा कुनै कुरा बुझ्नुभएन भने, यो राम्रो छ कि नसोचेको हो।
तपाईले चिन्ह लगाइएका सबै फाइलहरू प्रणालीमा कुनै पनि क्षति बिना मेट्न सकिन्छ। तर सोचेको बिना मेटाउने कार्यक्रमले प्राय: प्रोग्रामहरू को रूप मा प्रकट गर्दछ जुन सुरू गर्न सक्दैन, साथै नीलो स्क्रिनमा क्र्यासहरू।
धेरै सावधानी "Windows" सेक्सनलाई उल्लेख गर्नुहोस्। जब तपाइँ शीर्षकबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ कार्यहरू एकत्रित छन् जुन सीधा प्रणालीको प्रदर्शनलाई असर गर्न सक्छ। उत्साही - OS रिकभरी प्रक्रिया प्रक्रिया गर्न हुनेछ
त्यसोभए, विश्लेषण प्रक्रियामा फिर्ता। यस कार्यक्रमले सबै फाइलहरू स्क्यान गर्नेछ, त्यसपछि परिणामहरूको बारेमा तपाईलाई रिपोर्ट गर्नेछ। स्क्यानिङ प्रक्रियाले तपाईंको हार्ड ड्राइभको आकार र प्रणालीको अव्यवस्थाको आधारमा केहि समय लिन सक्छ। विश्लेषण पछि, तपाईंलाई "सफ्टवेयर" बटनमा क्लिक गर्न आवश्यक छ, पछि सबै "कचरा" मोटाइमा जान्छ।
हामी आशा गर्दछौं कि हामी तपाईलाई व्याख्या गर्न सकेन कि कसरी रजिस्ट्री त्रुटि ठीक छ!
SDK - के यो छ? वर्णन र सुविधाहरू
ओपेरा के हो - सर्वोत्तम ब्राउजर वा पुरानो कार्यक्रम?
तपाइँको कम्प्युटरमा वेबक्याम कसरी सेटअप गर्ने? यदि कम्प्यूटर भेट्टाउन वा वेब क्यामेरालाई रोक्न भने मलाई के गर्नुपर्छ?
ध्वनि प्रशोधन र ध्वनि रेकर्डिंगको लागि कार्यक्रम
"शब्द" मा रेखाचित्र कसरी बनाउने: एक विस्तृत गाइड
खाता ब्रुट्स के हो?
को "एन्ड्रोइड" मा ब्याट्री चाँडै discharged छ: समस्या गर्न कारण र समाधान
तातो भाँडा लागि सरल व्यञ्जनहरु
तपाईं कुन प्रकारको खेलमा आफैलाई महसुस गर्नुहुन्छ?
कसरी टमाटर देखि बोक्रा हटाउन र यसलाई बीउ देखि छील गर्न? सुझाव र चाल
दास - रूस मा दास
EMC प्रशिक्षण: डाक्टर को समीक्षा, कार्यक्रम र प्रभावकारिता
किन, बालिका को जन्म सपना मात्र एक चमत्कार भने?
एक होआ के हो?
छोराछोरीको बिजुली वाहन: ग्राहक समीक्षा
आफ्नै हातमा टायर को बगैचा फूलदान
घर मा वजन लागि व्यायाम। घरमा फिटनेस